တစ်ပွဲတစ်ထောင်နဲ့ အဝစားရတဲ့ ဗိုလ်ချုပ်ဈေးထဲက ဒူးရင်း၊အုန်းနို့သာကူပြင်လက်ဟောင်းဆိုင်လေး
13 Aug 2018 . 5:24 PM
ဒူးရင်းသာကူတွေ…အုန်းနို့သာကူတွေ…ရှယ်မှရှယ်ဗျို့။ တစ်ဘူးမှ တစ်ထောင်တည်းရယ်။ “အို..ဟယ်..ဘယ်လို” ဆိုပြီး ဈေးတန်လွန်းလို့ တအံ့တသြဖြစ်သွားကြမယ့် အုန်းနို့နဲ့ ဒူးရင်းသာကူပရိသတ်တွေအတွက် မျိုးရိုးသုံးဆက်လက်ဆင့်ကမ်းရောင်းလာတဲ့ မူလလက်ဟောင်း ဒီဆိုင်လေးကို ဗိုလ်ချုပ်ဈေးလာတိုင်း ရောက်ဖူးကြပြီးပြီလား?
ဈေးကြီးပေးဝယ်စရာမလိုဘူး။ အရသာလည်းရှိ အီဆိမ့်နေအောင်လည်း စားကောင်းတဲ့အပြင် အတုံးကြီး ၂တုံးကိုမှ ၁၀၀၀ ပဲပေးရတော့ ဗိုလ်ချုပ်ဈေးရောက်တိုင်းမဖြစ်မနေစားသင့်တဲ့အထဲပါတယ်ပြောရမယ်။ သိသလောက်တော့ ဗိုလ်ချုပ်ဈေးရဲ့ နာမည်ကြီးအစားအစာတွေထဲမှာ သူလည်းပါတယ်တဲ့။ ကဲ…စိတ်ဝင်စားသွားကြပြီမလား?
ဆိုင်လေးက အုန်းနို့သာကူပြင်၊ ပူတင်း၊ အုန်းနို့ဆနွင်းမကင်း၊ ငှက်ပျောသီးဆနွင်းမကင်းနဲ့ ကောက်ညှင်းရွှေကြည်အုန်းနို့ဆမ်းတို့လို မြန်မာမုန့်တွေအဓိကရောင်းချတာပါ။ဒါပေမယ့်ခုနောက်ပိုင်း ဒူးရင်းသာကူတွေနာမည်ကြီးလာတော့ သူတို့လည်း မှာစားတဲ့သူတွေဆန္ဒအရ ဒူးရင်းဆနွင်းမကင်းနဲ့ ဒူးရင်းသာကူပါထပ်ဖြည့်လိုက်တယ်တဲ့။
အရင်ကတော့ ဈေးထဲ အဆင်ပြေသလိုရောင်းပေမယ့် ခုကျတော့ ကားလေးနဲ့ နောက်ခန်းထဲမှာ အကျအနထိုင်ရောင်းနေတာ အားရစရာ။ မစန္ဒာဆိုတဲ့ အပြုံးချိုချိုနဲ့ အန်တီက ခုအဓိကရောင်းပေးနေပြီး အရင်က သူမအဘွား၊ အဘွားကနေ အမေ မျိုးရိုးအဆင့်ဆင့် ဒီဈေးကြီးထဲမှာပဲ လက်ဆင့်ကမ်းရောင်းချခဲ့တာတဲ့။ မစန္ဒာကတော့ ပတ်မကြီးအလယ်က ဆိုင်းဆရာလိုပဲ ပတ်ပတ်လည်က ဗန်းတွေကို ခပ်သွက်သွက်ဓါးနဲ့စိတ်ပေးပြီး ခွဲရောင်းပေးနေတာများ တစ်နေ့တစ်နေ့လက်တောင်မလည်ဘူးထင်ရတယ်။
ဈေးနှုန်းတွေက အတုံးကြီး ၂တုံးပါ တစ်ဗူးကိုမှ ၁၀၀၀ ပဲကျတယ်။ တန်ချက်ပဲနော်။ ပြီးတော့ ကြိုက်မကြိုက် အရသာမြည်းချင်တဲ့သူတွေအတွက် တစ်ဇွန်းပြီးတစ်ဇွန်းကိုအမြည်းကျွေးနေတာများ အမြည်းနဲ့တင် ဗိုက်ဝမလားပဲ။ မုန့်ရောင်းတာ စေတနာကလဲလိုသေးတာကိုး..နော်။
သူရောင်းတဲ့သာကူပြင်တွေက အပေါ်အုန်းနို့အနှစ်သားထက် အောက်က သာကူပြင်က ပိုများတာ ဝန်ခံပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အုန်းနို့သားကိုတော့ လျှော့မတွက်နဲ့နော်။ လုံးဝအဆီအနှစ်အပြည့် အတုံးလိုမာဆတ်ဆတ်နေတာမဟုတ်ဘဲ အိပြီးပျော်ကျနေတာ။ စားအကောင်းဆုံးပဲ။
ရောင်းတဲ့အန်တီ မစန္ဒာက ပြောလေရဲ့ ဒူးရင်းသာကူဆိုတာ အရင်ကလုပ်မရောင်းဖူးဘူးတဲ့ ခုစားတဲ့သူတွေမေးလို့သာလုပ်ရတာ သိပ်မလုပ်တတ်ဘူးလို့ ရိုးရိုးသားသားပဲဖြေသတဲ့။ တကယ် အမြည်းစားကြည့်တော့လဲ ဒူးရင်းနံ့လေးသင်းသင်းအရသာဆိမ့်ဆိမ့်လေးနဲ့ ဒီလောက်ပါပဲ။ ဒူးရင်းဖတ်တွေဘာတွေမမျှော်လင့်နဲ့နော်။ တစ်ပွဲမှ တစ်ထောင်ပါဆိုနော့်။
အမလေး..အကြောတွေ အီဆိမ့်သွားအောင် မွှေးပြီးစားကောင်းတဲ့ ပူတင်းတုံးအိအိလေးတွေက တစ်တုံးပြီးတစ်တုံး ဆက်စားချင်စရာကြီး။ နို့နဲ့ကြက်ဥကို ရှယ်ပေါင်းထားတဲ့ပူတင်းကို တစ်ထောင်နဲ့ဆိုတော့ ဘယ်လိုပြောရမလဲ..ကြိုက်ပြီးရင်းကြိုက်ပဲ။
(၄) ကောက်ညှင်းရွှေကြည် အုန်းနို့ဆမ်း
အချို၊ အဆိမ့်အပိုအလိုမရှိ မွှေးပြီးကောက်ညှင်းသားကအစ အနေတော်လေးကိုမှ အပေါ်က အုန်းဆီချက်လေးဆမ်းလိုက်တော့ အကြောပေါင်းတထောင်မဆိမ့်ဘဲ နေနိုင်ရိုးလား။
အမြည်းတွေ၊ အကြိုက်ဆုံး သာကူပြင်တွေနဲ့တင်ဗိုက်တင်းကားသွားရှာတဲ့ အခရာက အစားတလိုင်းခမျာ တခြား ငှက်ပျောပေါင်းတို့၊ ဒူးရင်းဆနွင်းမကင်းတို့၊ အုန်းသီးဆနွင်းမကင်းတို့ကိုတော့ ဗိုက်မဆန့်လို့ မမြည်းစမ်းခဲ့ရတာ ရင်ခံမဆုံးပဲ။
ကဲ…အုန်းနို့သာကူ၊ ဒူးရင်းသာကူတွေကို တန်းစီပြီး တကူးတက ဝယ်စားနေရတဲ့သူတွေရှိရင် ဝေးဝေးလံလံမလိုပါဘူး ဗိုလ်ချုပ်ဈေးက Cosmetics တန်းကြီးရဲ့ အလယ် လေဟာပြင်ထောင့်ဘက်မှာလည်း ကားလေးနဲ့ စားချင်တာအကုန် စေတနာပိုပို၊ အပြုံးချိုချိုနဲ့ ရောင်းပေးနေတဲ့ မစန္ဒာမြန်မာမုန့်မျိုးစုံ ရှိလေရဲ့နော်။ ဆိုင်းဘုတ်တော့မတပ်ထားပါဘူး။
တစ်ခုတော့ မှတ်ထားဦး။ မနက်တည်းက ရောင်းပြီး မကုန်မချင်း ရောင်းတာပါတဲ့။ Best 149 Cosmetics ဆိုင်အရှေ့မျက်စောင်းထိုးနားမှာ ကားလေးနဲ့ရောင်းတဲ့ မစန္ဒာနော်။ ကဲ… ဘယ်သူတွေကရော မစန္ဒာရဲ့ မြန်မာမုန့်တွေနဲ့ ကြီးပြင်းလာခဲ့သေးလဲ စားဖူးရင် ဖြေသွားကြပါဦးလို့။
တဈပှဲတဈထောငျနဲ့ အဝစားရတဲ့ ဗိုလျခြုပျဈေးထဲက ဒူးရငျး၊အုနျးနို့သာကူပွငျလကျဟောငျးဆိုငျလေး
ဒူးရငျးသာကူတှေ…အုနျးနို့သာကူတှေ…ရှယျမှရှယျဗြို့။ တဈဘူးမှ တဈထောငျတညျးရယျ။ “အို..ဟယျ..ဘယျလို” ဆိုပွီး ဈေးတနျလှနျးလို့ တအံ့တသွဖွဈသှားကွမယျ့ အုနျးနို့နဲ့ ဒူးရငျးသာကူပရိသတျတှအေတှကျ မြိုးရိုးသုံးဆကျလကျဆငျ့ကမျးရောငျးလာတဲ့ မူလလကျဟောငျး ဒီဆိုငျလေးကို ဗိုလျခြုပျဈေးလာတိုငျး ရောကျဖူးကွပွီးပွီလား?
ဈေးကွီးပေးဝယျစရာမလိုဘူး။ အရသာလညျးရှိ အီဆိမျ့နအေောငျလညျး စားကောငျးတဲ့အပွငျ အတုံးကွီး ၂တုံးကိုမှ ၁၀၀၀ ပဲပေးရတော့ ဗိုလျခြုပျဈေးရောကျတိုငျးမဖွဈမနစေားသငျ့တဲ့အထဲပါတယျပွောရမယျ။ သိသလောကျတော့ ဗိုလျခြုပျဈေးရဲ့ နာမညျကွီးအစားအစာတှထေဲမှာ သူလညျးပါတယျတဲ့။ ကဲ…စိတျဝငျစားသှားကွပွီမလား?
ဆိုငျလေးက အုနျးနို့သာကူပွငျ၊ ပူတငျး၊ အုနျးနို့ဆနှငျးမကငျး၊ ငှကျပြောသီးဆနှငျးမကငျးနဲ့ ကောကျညှငျးရှကွေညျအုနျးနို့ဆမျးတို့လို မွနျမာမုနျ့တှအေဓိကရောငျးခတြာပါ။ဒါပမေယျ့ခုနောကျပိုငျး ဒူးရငျးသာကူတှနောမညျကွီးလာတော့ သူတို့လညျး မှာစားတဲ့သူတှဆေန်ဒအရ ဒူးရငျးဆနှငျးမကငျးနဲ့ ဒူးရငျးသာကူပါထပျဖွညျ့လိုကျတယျတဲ့။
အရငျကတော့ ဈေးထဲ အဆငျပွသေလိုရောငျးပမေယျ့ ခုကတြော့ ကားလေးနဲ့ နောကျခနျးထဲမှာ အကအြနထိုငျရောငျးနတော အားရစရာ။ မစန်ဒာဆိုတဲ့ အပွုံးခြိုခြိုနဲ့ အနျတီက ခုအဓိကရောငျးပေးနပွေီး အရငျက သူမအဘှား၊ အဘှားကနေ အမေ မြိုးရိုးအဆငျ့ဆငျ့ ဒီဈေးကွီးထဲမှာပဲ လကျဆငျ့ကမျးရောငျးခခြဲ့တာတဲ့။ မစန်ဒာကတော့ ပတျမကွီးအလယျက ဆိုငျးဆရာလိုပဲ ပတျပတျလညျက ဗနျးတှကေို ခပျသှကျသှကျဓါးနဲ့စိတျပေးပွီး ခှဲရောငျးပေးနတောမြား တဈနတေ့ဈနလေ့ကျတောငျမလညျဘူးထငျရတယျ။
ဈေးနှုနျးတှကေ အတုံးကွီး ၂တုံးပါ တဈဗူးကိုမှ ၁၀၀၀ ပဲကတြယျ။ တနျခကျြပဲနျော။ ပွီးတော့ ကွိုကျမကွိုကျ အရသာမွညျးခငျြတဲ့သူတှအေတှကျ တဈဇှနျးပွီးတဈဇှနျးကိုအမွညျးကြှေးနတောမြား အမွညျးနဲ့တငျ ဗိုကျဝမလားပဲ။ မုနျ့ရောငျးတာ စတေနာကလဲလိုသေးတာကိုး..နျော။
သူရောငျးတဲ့သာကူပွငျတှကေ အပျေါအုနျးနို့အနှဈသားထကျ အောကျက သာကူပွငျက ပိုမြားတာ ဝနျခံပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ အုနျးနို့သားကိုတော့ လြှော့မတှကျနဲ့နျော။ လုံးဝအဆီအနှဈအပွညျ့ အတုံးလိုမာဆတျဆတျနတောမဟုတျဘဲ အိပွီးပြျောကနြတော။ စားအကောငျးဆုံးပဲ။
ရောငျးတဲ့အနျတီ မစန်ဒာက ပွောလရေဲ့ ဒူးရငျးသာကူဆိုတာ အရငျကလုပျမရောငျးဖူးဘူးတဲ့ ခုစားတဲ့သူတှမေေးလို့သာလုပျရတာ သိပျမလုပျတတျဘူးလို့ ရိုးရိုးသားသားပဲဖွသေတဲ့။ တကယျ အမွညျးစားကွညျ့တော့လဲ ဒူးရငျးနံ့လေးသငျးသငျးအရသာဆိမျ့ဆိမျ့လေးနဲ့ ဒီလောကျပါပဲ။ ဒူးရငျးဖတျတှဘောတှမေမြှျောလငျ့နဲ့နျော။ တဈပှဲမှ တဈထောငျပါဆိုနေျာ့။
အမလေး..အကွောတှေ အီဆိမျ့သှားအောငျ မှေးပွီးစားကောငျးတဲ့ ပူတငျးတုံးအိအိလေးတှကေ တဈတုံးပွီးတဈတုံး ဆကျစားခငျြစရာကွီး။ နို့နဲ့ကွကျဥကို ရှယျပေါငျးထားတဲ့ပူတငျးကို တဈထောငျနဲ့ဆိုတော့ ဘယျလိုပွောရမလဲ..ကွိုကျပွီးရငျးကွိုကျပဲ။
(၄) ကောကျညှငျးရှကွေညျ အုနျးနို့ဆမျး
အခြို၊ အဆိမျ့အပိုအလိုမရှိ မှေးပွီးကောကျညှငျးသားကအစ အနတေျောလေးကိုမှ အပျေါက အုနျးဆီခကျြလေးဆမျးလိုကျတော့ အကွောပေါငျးတထောငျမဆိမျ့ဘဲ နနေိုငျရိုးလား။
အမွညျးတှေ၊ အကွိုကျဆုံး သာကူပွငျတှနေဲ့တငျဗိုကျတငျးကားသှားရှာတဲ့ အခရာက အစားတလိုငျးခမြာ တခွား ငှကျပြောပေါငျးတို့၊ ဒူးရငျးဆနှငျးမကငျးတို့၊ အုနျးသီးဆနှငျးမကငျးတို့ကိုတော့ ဗိုကျမဆနျ့လို့ မမွညျးစမျးခဲ့ရတာ ရငျခံမဆုံးပဲ။
ကဲ…အုနျးနို့သာကူ၊ ဒူးရငျးသာကူတှကေို တနျးစီပွီး တကူးတက ဝယျစားနရေတဲ့သူတှရှေိရငျ ဝေးဝေးလံလံမလိုပါဘူး ဗိုလျခြုပျဈေးက Cosmetics တနျးကွီးရဲ့ အလယျ လဟောပွငျထောငျ့ဘကျမှာလညျး ကားလေးနဲ့ စားခငျြတာအကုနျ စတေနာပိုပို၊ အပွုံးခြိုခြိုနဲ့ ရောငျးပေးနတေဲ့ မစန်ဒာမွနျမာမုနျ့မြိုးစုံ ရှိလရေဲ့နျော။ ဆိုငျးဘုတျတော့မတပျထားပါဘူး။
တဈခုတော့ မှတျထားဦး။ မနကျတညျးက ရောငျးပွီး မကုနျမခငျြး ရောငျးတာပါတဲ့။ Best 149 Cosmetics ဆိုငျအရှမေ့ကျြစောငျးထိုးနားမှာ ကားလေးနဲ့ရောငျးတဲ့ မစန်ဒာနျော။ ကဲ… ဘယျသူတှကေရော မစန်ဒာရဲ့ မွနျမာမုနျ့တှနေဲ့ ကွီးပွငျးလာခဲ့သေးလဲ စားဖူးရငျ ဖွသှေားကွပါဦးလို့။